Bhuku Rekutanga raSamueri 24:1-22
Dhavhidhi anorega kuuraya Sauro (1-22)
Dhavhidhi anoremekedza muzodziwa waJehovha (6)
24 Sauro paakangodzoka kunotevera vaFiristiya, vanhu vakamuudza kuti: “Dhavhidhi ari murenje reEni-gedhi!”+ 2 Saka Sauro akatora varume 3 000 vakasarudzwa pavaIsraeri vese, akaenda kunotsvaga Dhavhidhi nevarume vake kumatombo ane mawere embudzi dzemumakomo. 3 Sauro akasvika pamatanga emakwai ematombo aiva pamugwagwa, apo paiva nebako uye akapinda imomo kuti azvibatsire,* uye Dhavhidhi nevarume vake vainge vakagara nechemukatikati kunoperera bako racho.+ 4 Varume vaDhavhidhi vakati kwaari: “Nhasi Jehovha ari kuti kwamuri, ‘Ndaisa muvengi wako muruoko rwako,+ uye unogona kuita chero zvaunoda naye.’” Saka Dhavhidhi akasimuka, akacheka kumupendero wenguo yaSauro isina maoko chinyararire. 5 Asi pashure paizvozvo hana yaDhavhidhi yakaramba ichimutongesa+ nekuti akanga acheka kumupendero wenguo isina maoko yaSauro. 6 Akati kuvarume vake: “Hazvitomboiti mukuona kwaJehovha kuti ndiitire ishe wangu, muzodziwa waJehovha, zvinhu zvakadaro nekusimudza ruoko rwangu kuti ndimurwise, nekuti iye muzodziwa waJehovha.”+ 7 Saka Dhavhidhi akadzora varume vake* nemashoko iwayo, uye haana kuvabvumira kuti varwise Sauro. Sauro akabva abuda mubako akaenda. 8 Dhavhidhi akabva asimuka akabuda mubako, akashevedzera ari shure kwaSauro, achiti: “Ishe wangu mambo!”+ Sauro paakacheuka, Dhavhidhi akabva apfugama, akadzikisa musoro wake. 9 Dhavhidhi akati kuna Sauro: “Nei muchiteerera mashoko evarume vanoti, ‘Dhavhidhi ari kuda kukuitirai zvakaipa’?+ 10 Nhasi chaiye maziso enyu aona kuti Jehovha akuisai muruoko rwangu mubako. Asi mumwe munhu paati ndikuurayei,+ ndakunzwirai tsitsi ndikati, ‘Handisi kuzosimudza ruoko rwangu kuti ndirwise ishe wangu, nekuti iye muzodziwa waJehovha.’+ 11 Onai baba vangu, chokwadi tarisai muone mupendero wenguo yenyu isina maoko wandakabata; nekuti pandacheka mupendero wenguo yenyu isina maoko, handina kukuurayai. Iye zvino mava kuzviona uye mava kuziva kuti handisi kuda kukuitirai zvakaipa kana kukupandukirai, uye handina kukutadzirai,+ asi imi muri kundivhima kuti mundiuraye.*+ 12 Jehovha ngaatonge pakati pangu nemi,+ uye Jehovha ngaakutsivei achiitira ini,+ asi ruoko rwangu harusi kuzokurwisai.+ 13 Pane chirevo chekare chekuti, ‘Zvakaipa zvinobva kune vakaipa,’ asi ini ruoko rwangu harusi kuzokurwisai. 14 Mambo waIsraeri abuda kuzotevera ani? Ndiani wamuri kudzingirira? Imbwa yakafa here? Nhata imwe chete here? + 15 Jehovha ngaatonge, uye achatonga pakati pangu nemi; achaongorora nyaya yangu ondireverera+ uye achanditonga, ondinunura paruoko rwenyu.” 16 Dhavhidhi paakapedza kutaura mashoko aya kwaari, Sauro akati: “Inzwi rako here iri mwanakomana wangu Dhavhidhi?”+ Uye Sauro akatanga kuchema achiridza mhere. 17 Akati kuna Dhavhidhi: “Wakarurama kundipfuura, nekuti uri kundiitira zvakanaka, asi ini ndiri kukuitira zvakaipa.+ 18 Nhasi wandiudza zvakanaka zvawandiitira pawarega kundiuraya Jehovha paandiisa muruoko rwako.+ 19 Nekuti ndiani munhu anoti kana awana muvengi wake, anomurega achienda asina kumukuvadza? Jehovha achakupa mubayiro wezvakanaka+ nemhaka yezvawandiitira nhasi. 20 Iye zvino ndava kuziva kuti uchava mambo+ uye kuti umambo hweIsraeri hucharamba huri muruoko rwako. 21 Saka ndipikire naJehovha+ kuti hauzoparadzi vazukuru* vangu vachatevera uye kuti hauzodzimi zita rangu muimba yababa vangu.”+ 22 Saka Dhavhidhi akapika kuna Sauro, Sauro achibva aenda kumba kwake.+ Asi Dhavhidhi nevarume vake vakaenda kunhare.*+
^ ChiHeb., “kuti afukidze tsoka dzake.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “akaita kuti varume vake vapararire.”
^ Kana kuti “muuraye mweya wangu.”